Mitaraina ny tompon’ny MPO Toamasina “Fampiasam-bola 6 tapitrisa dolara izao somparan’ny fanjakana izao”
Mahatratra 07ha58a71Sa ny velaran’ity tany hanorenan’ny Madagascar Premium Oil (MPO) orinasa ao Tanandava ity.
Taorian’ny fahazoany ireo antontan-taratasy rehetra mikasika ny fananganana orinasa fanodinana menaka tahaka izao avy amin’ny minisitera samy hafa, anisan’izany ny tontolo iainana teo anivon’ny ONE, dia nanangana azy ity ingahy Chane Mamod, tale jeneralin’ny MPO. Amin’ny fampiatoana nataon’ny fanjakana amin’ny fananganana ny orinasa izao dia ny 80%-n’ny asa no efa tafatsangana raha ny fotodrafitrasa ankapobeny no jerena. Manginy fotsiny ireo mpiasa an-jatony lasa tsy an’asa tampoka. Ny anton’ny fampiatoana anefa tsy mazava ary tsy voalaza ao anatin’ilay didim-pitondrana akory na ilay navoakan’ny minisitry ny indostria ny 05 aogositra na ilay navoakan’ny minisitry ny fanajariana ny tany ny 14 aogositra. Ao anatin’izao raharaha izao anefa dia manomboka kivy ny mpamatsy vola mivantana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fananganana orinasa fa mivadibadika sy tsy matotra amin’ny fanapahan-kevitra raisiny ny fanjakana Malagasy fa mbola manome vahana antokon’olona hatrany. Ho an’ingahy Chane Mamod tale jeneralin’ny MPO, famatsiam-bola 06 tapitrisa dolara no entiny hananganana izao fotodrafitrasa hiharan’ny antsojain’ny fanjakana izao ary amin’ny fotoana fahavitany izay kasaina hiasa ny taona ho avy io dia mpiasa manodidina ny 800 no hiasa ao ankoatra ireo mpiasa an-tselika sy ireo mpiara-miasa samy hafa. Hatreto aloha dia mpiasa 600 mpanamboatra ny orinasa no tsy voasokatra vavahady sy tsy an’asa tampoka noho ilay fanapahana noraisin’ny minisitra Lantosoa Rakotomalalala sy ny minisitra Hajo Andrianainarivelo mampiato ity orinasa MPO Tanandava Toamasina II ity.